Salaadii Dilaacdaba Warsaxaafadeed, Dagaal Baa Socda, Aan Waxba ka Jirin oo Kala Socda, Siday Wax u Jiraan! – Rasaasa News
Jun 12, 2010 Aan Waxba ka Jirin oo Kala Socda, Dagaal Baa Socda, Salaadii Dilaacdaba Warsaxaafadeed, Siday Wax u Jiraan!
Wadaadka Wareersan, webbabakaan wax kasaynin, walaaca ku beermay, waxay qorayaanba walayna ogayne. Saddex bogg oo mid waliba iskiis warsaxaafadeed u soo saaro todobaadkii 2 goor.
Kooxda Jwxo-shiil iyo boggagii wax u qori jiray oo uu galay khalkhal aan caadi ahayn. Boggaga Jwxo-shiil wax u qora ayaa badankood ah kuwo xin loo sameeyey oo ay wax ku qoraan qaar aan qalin iyo buug isa saareen balse bawsaday qoraalka afka Somaliga. Boggagan ayaa kala ah Qorahey.com, Ogaden.com oo iyagu ahaa kuwo mar hore la furay in kasta oo labadooduba ay xin isga daba furmeen iyaga oo kala wata magacyada [Cabdi iyo Isaaq]. Kolka aad u fiirsato hanaanka ay ku furmeen ama ay u shaqaynayeena ayna ahayn wax raad ku leh halgan iyo horumar ay hesho ummada Somalida Ogadeeniya.
Qaybta 2 aad ee boggaga Jwxo-shiil, taageera ayaa waxaa ka mid ahaa; Ogadennet.com, Ogadentoday.com iyo haleelo.com. Boggagan oo kuligood loo furay xin iyo waxyeelaynata bulshada Ogadeeniya, waayo waxa ay qorayaan ma aha wax ummada dan ugu jirto. Hadii ay ahaan lahaayeen boggagani kuwo daacad ah oo taakuleeya halhganka ummada Somalida Ogadeeniya ee eegga xijaabtay, waxay isugu tagi lahaayeen hal bogg oo qudha. Laakiin waxaa dhab ah in ay arintu tahay nin tooxsi iyo beelo beelo, ay beel waliba hal bogg leedahay, waa nasiib xumo wayn.
Waxaa jiray boggag kale oo iyaga laftigoodu Jwxo-shiil si khaas ah u taageeri jiray, kolkii ay furan tahay rasaas.com waa la xidhay kolkii ay u adkaysan waayeen tooshka xooga badan ee daba socda Jwxo-shiil iyo cidii taageerta. Waxaa ka mid ahaa boggagaas hanqadh.com, Dufaan.com iyo haradigeed.com. kuwaas oo kuligood maanta hawada ka baxay.
Waxaan boggagan u soo qaatay, waxaan rabaa in aan dadweynaha tuso in uu Jwxo-shiil yahay Fule ulo badan oo aan fagaare soo istaagi karin. Waxaana uu kolkii ugu horaysay ee uu halganka soo galayba soo hawl galiyo boggag badan oo kuligood been ku taageera sidii XHKS iyo hooyooyinkii garab didi jiray.
Rasaas.com, been ma sheegto waxna ma qariso, waxayna maanta aragtaa oo ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya u soo bandhigaysaa in uu Jwxo-shiil meel banaan taagan yahay. Daliil waxaa u ah in boggagi taageeri jiray ay maanta wareeren oo mid waliba maalinta ay doonto ay soo saarto Wareegto ka soo baxday kooxda Jwxo-shiil.
Arintaas waxaan u fasiran karaa in xubin walba oo ka mid ah Kooxda Jwxo-shiil uu soo saaro Wareegto iskiis ah, kuna soo qoro bogga ka amarqaata.
Khalkhalka xoogiisa waxaa keenay UWSLF, oo iyadu heshii uu dadweynaha Somalida Ogadeeniya u baahnaa la gaadhay xukuumada Itobiya.
Khalkhalka Jwxo-shiil, ayaa dabada ku haya hinaase ah, maxaa aniga la iila heshiin waayey oo Somali galbeed oo iga awood yar loola heshiiyey. Waa run way ka awood yarayd oo ma jirin dawlado shisheeye oo taageri jiray sida Eritrea oo taageerta kooxda Jwxo-shiil, balse waxaa dham ah in ayna isku siyaasd iyo isku faham toona ahayn.
Dadweynaha waxaan ka codanaynaa bal in ay la socdaan khalkhalka boggag beenta Jwxo-shiil, ayna nala soo socdsiiyaan argartidooda ku aadan khalkhalka.